को हुन् सडकमा निर्वस्त्र भएर प्रर्दशन गर्ने युवती ? (भिडियोसहित) « Kathmandu Pati
को हुन् सडकमा निर्वस्त्र भएर प्रर्दशन गर्ने युवती ? (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : २०७७, ७ श्रावण बुधबार १५:२३
एजेन्सी – सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक युवतीको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ । यो अमेरिकाको पश्चिम तटीय सहर पोर्टल्यान्डमा शनिबार राति करिव १ः४५ बजे भएको प्रदर्शनको क्रममा खिचिएको दृश्य हो ।
प्रद्धर्शनकाबीच सडकमा एक्लै सुरक्षाकर्मीको सामना गर्न तयार ती युवतीले सबैको ध्यान आफुतिर खिचेकी थिइन् । सबैको ध्यान आफुतिर तानिनुमा एक कारण उनको साहस थियो भने अर्को कारण उनी विल्कुलै नग्न अवस्थामा प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनले शिरमा कालो टोपी र मुखमा कालो मास्कबाहेक अरू कुनै कपडा लगाएकी थिइनन् ।
पछिल्लो समय अमेरिकामा जातीय विभेद लगायत जोखिमपूर्ण समूहको मुद्दा उठाएर देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको बेला दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसामु शारीरिक रूपले नग्न र शान्त हाउभाउमा प्रस्तुत भएकी ती युवतीलाई अमेरिकामा जारी विद्रोहकी प्रतीक मानिएको छ ।
झन्डै १५ मिनेटसम्म सडकमा विभिन्न हाउभाउ प्रस्तुत गरेपछि केही बेर शान्त मुद्रामा उभिएकी उनी चुपचाप भीडमा हराएकी थिइन् । परिचय नखुलाइएपनि ती युवतीको सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘नेकेड एथेना’ भनेर परिचय गराइएको छ ।